DEG DEG: Shir muhiim u ah Doorashooyinka Puntland oo ka furmaya Garoowe & Ajende xasaasi ah oo laga hadlayo. – Puntlandtimes
DEG DEG: Shir muhiim u ah Doorashooyinka Puntland oo ka furmaya Garoowe & Ajende xasaasi ah oo laga hadlayo.
March 3, 2018 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES) – Guddiga Doorashooyinka KMG ah ee Puntland loona yaqaano TPEC ayaa iskugu yeeray Wasiiradda afar wasaaradood, Gudoomiyaasha gobalada, Dalladda Bulshada rayidka ah, Dalladda Dhalinyarada iyo Urur siyaasadeed ee is diwaangaliyey, waxaana saaka shir uga furmayaa magaalada Garoowe.
Wasiiradda Arrimaha gudaha, Amniga, Warfaafinta iyo Dastuurka ayaa madashan ka hadli doona waxayna balan qaadi doonaan sidda ay u taageersan yihiin meelmarinta arrimaha muhiimka ah ee la xariira Nidaamka Asxaabtada badan.
Sidaas oo kale Ururada Siyaasadeed ee ilaa hadda is diwaangaliyey ayaa la guddoonsiin doono Shahaado KMG ah oo ay ku sii wadan karaan howlahooda, waxaana taasi ay ka dhigan tahay dadaal xoog leh oo lagaliyey arrimaha Doorashooyinka.
TPEC ayaa u xilsaaran sidii ay meelmar uga dhigi lahayd nidaamka Asxaabta badan ee Puntland, waxayna si gaar ah diiradda u saaraysaa in la qabto doorashooyinka golayaasha degmooyinka Puntland , taas oo ah mid ay sugayaan Shacabku, waxaana ku soo bixi doona sadexda Xisbi ee si rasmi ah ugu tartami doona doorashada Madaxtinimada Puntland xiligii ay noqotaba.